Posted by Kaung Kin Ko at 10:10 PM
မြန်မာပြည်က လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ပေါက်ကွဲသံစဉ်တွေကို ကြားလိုက်ရတယ်...။ ရင်ထဲမှာ ဒီအသံတွေ ကျယ်လောင်နေတာ ကြာပေါ့... =)
really great .thank you
2way thinking ဝေါဟာရတွေ အများကြီးတွေ့ရတယ်..။
really good one! two thumbs up!!!
how to link to my fb bro
၀ိုး....ဘုရားသခင် တောင် ဖြေရှင်းမပေးနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေဆိုပါတော့...ဒီလိုပါပဲ...“ဘုရားသခင်က မင်းကို စောင့်ကြည့်နေတယ်”ဆိုတဲ့ စကားကို ဗိုက်ထဲမှာကတည်းကကြားလာခဲ့တာ..ဒီအသက်အထိပဲ။
“ပညာဗဟုသုတ နိမ့်လို့ ညံ့တဲ့ အစိုးရ နဲ့ စနစ်ကိုရ၊ ညံ့တဲ့ စနစ်ကိုရလို့ပညာဗဟုသုတနိမ့် ဒီလိုနဲ့ပဲ သံသရာလည်ရ တော့မှာလား”
ဒါကဒီလိုရှိတယ် ကိုကောင်းရဲ့ ပညာမြင့်အောင်နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသွားသင် ၊ ဦးနှောက်တွေရောင်း၊ ငါ့တို့ပညာ ပြည်မြန်မာနဲ့ မတန်ပါဘူးကွာ လို့ပြော။ ပညာနည်းအသက်ငယ်သော ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေက ဘာသားခြားတို့ရဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာ ကျွန်လာခံရ။ သမီးပျိုးများက ...လာခံရ။ တိုင်းပြည်မှာ လူမမယ်ကလေး၊ သက်ကြားအိုများနဲ့ ရောဂါသည်များကျန်ခဲ့။ တိရိစ္ဆာန်တွေတောင် အုပ်လိုက် ချိုင့်ဝှမ်းထဲဆင်း၊ အပင်တွေပြုန်း၊ ---တော်ပြီ၊
facebook Link ဆိုတာ နှိပ်ပြီး http://kaungkinko.blogspot.com/2011/03/blogspotcom.html လို့ထည့်လိုက်ရင် ရတယ်ဗျ။း-) အားပေးလို့ ကျေးဇူး
တော် တော် မိုက် တယ် !
Dear Kaung kin ko , would u mind thinking about recent situation in AFKANISTAN AND BURMA ? I know u are very good at thinking .
ကောင်းလိုက်တာဗျာ ၊ ကျွန်တော့မှာ ဘလောက်စာထဲမှာ ဘုရားသခင်.blogspot.com ဆိုပီး အုကိမ်ုကိမ်တောင် ရှာမိပါတယ် ။ ရှိမလားလို့ပေါ့ ။
hi bro can i share this post?
ဟုတ်ကဲ့။ ရတယ်ဗျ။း-)
ရေရေလည်လည်ကြိုက်လွန်းလို့ရှယ်လိုက်ပြီဗျာ...
အတိုး အလျော့ မရှိ။ လေးစားလျက်..
ဘုရာ့ရဲ့ ဖွာ့ဖက်တော် နာမည်က ဘာလဲ
လူတွေလည်း ရှိတယ်။ မြင်းတွေလည်း၇ှိတယ်။
ယသော်ဓရာ၊ ညီတော် အာနန္ဒာ၊ ဆန္န
Joe Break said...
မေးခွန်းတွေထုပ်နေပါ့လား... ဘုရားကဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးနော်... ကလေးကိုမိဘ အုပ်ထိန်းတယ်... မိဘကို ရပ်ကွပ်လူကြီးအုပ်ထိန်းတယ်... ရပ်ကွပ်လူကြီးကို တိုင်းမှူးအုပ်ချုပ်တယ်... တိုင်းမှူးကို ၀န်ကြီးအုပ်ချုပ်တယ် တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုသမ္မတအုပ်ချုပ်မယ် အဲ... တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုတော့ ဘုရားသခင်အုပ်ချုပ်တယ်.. ဘယ်ကလေးသူ့အလိုလိုလမ်းလျှောက်သင်ယူတတ်မြောက်ခဲ့သလဲ?? ဘယ်ကလေးက သူ့မိဘကိုသူ့အလိုအတိုင်းရွေးခဲ့သလဲ..?? ဆိုတော့ လိုချင်တာရှိရင် အားကိုးရှိဖို့လိုတယ်... ရွေးချယ်စရာကတော့ မိဘတွေမရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရပ်တည်ရမှာလား?? ဘုရားကိုကိုးစားမှာလား?? အဲ့ဒီတော့ အနီးဆုံးမိဘ ၂ပါး နေရာရယ်
အဝေးဆုံး ဘုရားသခင်ရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ ပြောင်းလိုက်ကြရအောင်.. အယောက်ဆီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ...
sawpl yan said...
ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးသင်တယ် ကိုယ်တော် စကယ်တော်မူပါ၏ ဘုရား